MOC (egwu dị na njikwa) | Site na Linux
MOC (egwu dị na njikwa)
Chidinma | | Aplicaciones
Ekele, ma nabata na obere edemede a, aha m bụ Martín, taa m ga-ekwu maka igwe egwu IKE.
0.1 Okwu mmeghe
0.2 Mgbe iji MOC?
0.3 Gaa enyemaka.
0.4 Fluxbox + MOC
1 Uzo mkpirisi maka moc
1.1 KDE + MOC
1.2 Akwụkwọ ndị a:
M ka gụrụ isiokwu banyere MPD bipụtara na saịtị a, ọ dị m ka onyinye dị mma. Otú ọ dị, tupu ịmara MPD zutere IKE.
«IKE bụ ihe ọkpụkpọ egwu na-agba ọsọ na njikwa site na iji interface dị mfe ncurses. Audiodị ọdịyo akwadoro gụnyere OGG, MP3, WAV, n'etiti ndị ọzọ. »
Wepụtara na peeji nke nwoke.
Mgbe iji IKE?
Mgbe ịmalite njem m site na ụwa GNU / Linux, Ahụrụ m onye njikwa windo ahụ KDE. Ihe a na-ede ede na ya dakwasịrị m, nke na m nọrọ ihe karịrị ọnwa isii. Ma, otu ụbọchị, m bịara n'ụlọ ma kpebie ịnwale ihe ọhụrụ (mee ka ọnọdụ ọrụ m dịkwuo mma), na Fluxbox ọ dị njikere, na-eche ohere.
Mgbe ahụ, akụrụngwa m malitere iku ume, ọtụtụ usoro kwụsịrị (usoro ndị ọ na-achọghị n'ezie); mana KDE ka diri ebe -mgbe ahu Ọfọn- na nke ahụ mere ka m nwee obi erughị ala.
Otu ụbọchị achọpụtara m IKE, ọ bụ ihe ijuanya n'ihi na enweghị nhazi ọzọ dị mkpa, naanị m na-agba ọsọ mopp na iwu nchịkwa ma ọ bụ onye na-ebupụta iwu Alt + F2 m wee banye: xterm -e mocp.
Ihe omume a na-eme na ngalaba ole na ole, n'akụkụ aka nri anyị nwere akwụkwọ ndekọ aha anyị, na n'akụkụ aka ekpe, ndepụta ọkpụkpọ anyị ga-apụta.
Ozugbo ịmalite, anyị pịa igodo ahụ h. Usoro ihe omume ahụ zara ndepụta nke nhọrọ dịnụ.
Otu n'ime ihe kachasị mkpa anyị nwere:
q -> Wepụ ihe ọkpụkpọ. Naanị pụọ, akwụsịkwala egwu.
a -> Tinye faịlụ ma ọ bụ ndekọ na listi ọkpụkpọ. Iji jiri a nhọrọ anyị ga-akpa ịnyagharịa na akụ igodo na-ahọrọ ndekọ ebe anyị ọdịyo faịlụ na-emi odude.
A -> Tinye ndekọ recursively ka playlist. Iji jiri nhọrọ a, anyị ga-ebu ụzọ jiri ịnya ụzọ igodo wee họrọ ndekọ ebe faịlụ ọdịyo anyị dị.
p -> Gwuo egwu a họọrọ.
n -> Gwuo egwu ọzọ.
b -> Gwuo egwu egwu gara aga.
s -> Kwụsị ọkpụkpọ.
p o Space -> Kwụsị ọkpụkpọ.
Tab -> vnyagharịa n'etiti playlist na onye ọrụ faịlụ usoro.
Ma ihe na-eme, nke a abụghị n'ezie nnukwu uru gị. N'uche m, nke kachasị mma bụ ịwụnye ihe nkesa ahụ mgbe ịbanye na wee megharịa playback site na iji ụzọ mkpirisi keyboard. Maka nke a, ị ga-enyocha akwụkwọ ntuziaka nke onye ọkpụkpọ ahụ.
Fluxbox + MOC
Mgbe ị na-agba ọsọ Nwoke mocp, anyị na-enweta akwụkwọ ndị metụtara ya MOCP. Site n'ebe ahụ anyị ga-enweta nke ahụ iji bido nkesa ahụ, anyị chọrọ igwe -S, nke na-enye ohere ịmalite ihe nkesa ahụ.
Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị dezie ntọala nbanye anyị, mgbe ahụ anyị na-egosi otu esi enweta nke a Fluxbox.
Fluxbox na-echekwa faịlụ nhazi ya na ndekọ zoro ezo n'ime ndekọ ụlọ onye ọrụ ọ bụla ~ / .fluxbox /. N'ebe ahụ, anyị na-ahụ faịlụ: ngwa ọdịnala, init, igodo, menu, machie, malite, n'etiti ndị ọzọ; na ụfọdụ nhazi ndekọ aha ndị ọzọ.
Anyị ga-amalite site na ịdezi faịlụ ahụ malite. Site na ọnụ anyị na-emezu vim ~ / .fluxbox / mmalite anyị tinye igwe -S, dị nnọọ tupu ahịrị kpoo fluxbox, dị ka foto a na-egosi
Anyị na-echekwa mgbanwe, ma mechie wd. ma ọ bụrụ na wd ọ bụghị mmasị gị, ịnwere ike iji ụfọdụ ederede ederede ọzọ.
Nhọrọ ndị ọzọ na-amasị m site na akwụkwọ ntuziaka IKE, ya Osote, gara aga, Kwụsị, igwu egwu, kwusi, akwusi akwusi, na-achọ, isiokwu. Dozie ụzọ mkpirisi igwu egwu, nke ọzọ, nke gara aga, kwụsị, ...
Mgbe ahụ, anyị dezie faịlụ ahụ igodo. Na faịlụ a, enwere ọtụtụ ihe inyocha, m ga-anwa nkenke ka m kwere. Anyị kwesịrị Moddị 1 Ojiri ya na igodo Alt, yabụ m ga-eji ya kọwaa ndagwurugwu m:
Uzo mkpirisi maka moc
Mod1 Mgbanwe Z: Exec xterm -bg ojii -fa monospace -fs 11 -e mocp -theme green_theme
Mod1 P: Exec mocp -t shuffle, autonext -play
Mod1 S: Exec mocp - nkwụsị
Mod1 N: Exec mocp -next
Mod1 B: Exec mocp - gboo
Mod1 L: Exec mocp -nkwụsị
Mod1 K: Exec mocp - ịkwụsị
Mod1 Mgbanwe S: Exec mocp --seek -3
Site na ịkọwa njikọ ndị gara aga, anyị nwere ike:
Mepee ihe ọkpụkpọ na: Alt + Mgbanwe + Z, Egosikwara m na m chọrọ iji isiokwu ahụ green_theme. Maka isiokwu ndị ọzọ, gbaa ọsọ ls /usr/share/moc/themes/
N'otu aka ahụ, anyị na-amalite playback na Alt + P. Nhọrọ -t ịkpọgharịa, autonext na-egosi na achọrọ m iji usoro adịghị mma ma nwee egwu egwu dị iche iche na-egwu otu mgbe ọzọ.
con Alt + N anyị na-egwu egwu na-esote, wee gabazie na ụzọ mkpirisi keyboard.
Na ... na KDE?
KDE + MOC
Ọ dị mma nke ukwuu, mopp ị masịrị ya mana ịchọrọ ịnọ na KDE. Ka anyị tinye otu ntọala ahụ:
Alt + F2, anyị na-ewebata: sistemụ
Anyị na-aga n'ihu na Ntinye ngwa ngwa na mmegharị ahụ
Ugbu a Pịa nri > Ndi ohuru
Anyị na-akpọ aha anyị otu
Pịa aka nri> Ọhụrụ> Uzọ mkpirisi ụwa> Iwu / URL:
Ugbu a na akpalite na taabụ ebe ahụ chọrọ mkpirisi
Na Action tab anyị na-etinye iwu kwesịrị ekwesị maka ụzọ mkpirisi ọ bụla.
Ọfọn, ọ bụ ya na obere nkuzi a. Enwere m olileanya na ị masịrị ya ma gaa n'ihu na-ahazi ya GNU / Linux.
Laptọọpụ: Samsung RV415
Ọrụ usoro: GNU / Slackware Linux v14.1
WM: Fluxbox, KDE
Maka nkuzi a, anyị na-amalite site na nwụnye nke GNU / Slackware Linux Operating System; ya mere, a na-etinye ngwungwu ngwanrọ niile. Ọ bụrụ na nke a abụghị nke gị, anyị na-abanye dị ka superuser na ojiji MARKDOWN_HASH0ac53b8a47f34f5ed67043157642cf65MARKDOWN_HASH.
Akwụkwọ ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MOC (egwu dị na njikwa)
Ihe 21 kwuru, hapụ nke gị
M ka na-ahọrọ ncmpcpp ...
M na-eji ha abụọ, (n'ezie karịa ncmpcpp (mpd), m na-ahọrọ phpMpReloaded), ọ bụ ezie na m na-eji ha maka ihe dị iche iche, mpd maka ụlọ akwụkwọ ọpụpụ (ma ọ bụ listi ọkpụkpọ site na steaming), na moc ana m eji ya na-ege ntị na ada ( tupu ị gbakwunye na ọbá akwụkwọ ma ọ bụ mepụta ndepụta), echere m na ọ bụ njirimara kachasị nke moc, nke dị ntakịrị na mpd.
Zaghachi ebe a
Eziokwu bụ onye ọkpụkpọ kachasị mma na njikwa ahụ, ejiri m ya ogologo oge na ọ kachasị mma. Ma m gaghị ahapụ Kde maka fluxbox, haha ​​enwere m ezigbo ahụ ebe a.
Dị nnọọ uru, maka ndị ahụ chọrọ minimalism dị ọcha. Ma site n'ụzọ, M na-eji Slackware.
na-agbanwe isiokwu ahụ: ọ ga - ekwe omume mezuo ịdabere na akpaghị aka na Slackware? Achọrọ m ịnwale ma anaghị m anwa anwa
Na-akpali 🙂 Ọzọ ezi nhọrọ bụ MPD, nke ozugbo ahazi i nwere ike iji ya na dị iche iche ihu. Cantata na KDE, Sonata na GTK desktọọpụ, ọtụtụ nhọrọ na ọnụ ... Jikwaa ya site na gam akporo / iOS / PC ndị ọzọ ... More nwere, mana ị ga-anụ agba ndị a ...
I kwuola ya, MPD dị ike karịa ma na njedebe nke ụbọchị ihe dị mkpa bụ etu onye ọrụ si emegharị ihe ọkpụkpọ ahụ
Edemede dị mma, ọ baara m uru. Aga m eji ya na Openbox na Arch, ebe ọ bụ na ekele na ọkụ na modul RAM hapụrụ m 1Gb.
Daalụ maka onyinye.
Ọ dị ezigbo mma ọbụlagodi na m na-ahọrọ iji ncpcpp na ọbụna mgbe e mesịrị m na-agbalị moc ka ọ ghara ịnọ na-enweghị ịnwale ya ma nwee ike inye echiche m banyere ya, ekele na ekele! 0 /
Ndo, m kwuru na * ncmpcpp
Nnọọ Mkpa ọkụ, mfe ma minimalist m nwere ike ikwu cplay.
Enwere m ya na Gentoo m na igbe mbata na ụlọ ma na-arụ ọrụ na ihe nkesa na-enweghị ihe ọ bụla yana oghere igbe.
Daalụ! .. ..ọ na-abịa n'otu puku pel. ..M ga-emegharị ya na Openbox m na Arch ..
Zaghachi na RAW-Basic
M na-ejikwa ọkpụkpọ a mgbe ụfọdụ. Ọ bụ ihe mgbaze n'ụzọ zuru oke iji gboo mkpa m dị n'ozuzu yana site na njedebe.
Enwere m mmasị na fluxbox! Uzo uzo abuo bara ezigbo uru!
na naa dijo
Ezigbo ozi, nkọwa zuru ezu na nke mbụ!
M na-eji Banshee iji jikwaa ọbá akwụkwọ egwu m nke na-atọ ọchị. Otú ọ dị iji mụta nwa ihe achọrọ m otu a. 🙂
Aga m etinye n'ọrụ! Cheers!
Nwekwara ike ịnọnyere mplayer
Akwa ma m ka na-ahọrọ MPD + NCMPCPP 😀
PD ¿Banda MS? Espinoza Paz? hahahaha Ekele si Sinaloa 🙂
Moc bụ ọkpụkpọ kacha mma n'ụwa na gburugburu ya… ..
mpd + ncmpcpp> *
ogbenye taku dijo
magburu onwe, Ana m anwale ya na echeghị m na m ga-alaghachi na eserese eserese!
Ọ dị ezigbo mma!
Ekele m niile, enwere m obi ụtọ ịmara na enwere obodo, nakwa na ọ nwere mmasị na ndị ọzọ na-akwụghị ụgwọ.
A obere mgbazi, igodo 'p' abụghị maka egwuregwu, jiri 'Tinye' maka ebumnuche ahụ.
Agbalịrị m idezi post ahụ mana o doro anya na nhọrọ ahụ adịghị eche echiche, hehe.
Site na FirefoxOS: Amuru oru ohuru
Olee otú iji gbochie gị USB ebe nchekwa site na mgbasa ozi nje ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-ebute ya